🥇 ▷ Astaamahee aad sugi kareyso deyrta ✅
Astaamahee aad sugi kareyso deyrta
Apple u hibeeyay dhacdadii hore ee ugu horreysay iPhone, iPad iyo Apple Watch, HomePod ayaa ilaa hadda madhan. Milkiilayaasha dhululubo yaryar waa inay muddo dheer sugaan cusboonaysiinta, laakiin ka hel websaydhka Apple laakiin hadda, iyo waxyaabo kale, muuqaal aan horay loo aqoonin.
Apple HomePod: Cusboonaysiinta softiweerku waa inay u oggolaataa taageero badan iyo adeegsato badan
Horeyba macnaha guud ee shir sameeyaha WWDC wuxuu Apple u sameeyay qaar ka mid ah ku dhawaaqida HomePod. Cusboonaysiinta munaasibku maaha sida caadiga ah isla waqti isku mid ah ayaa ka muuqata cusboonaysiinta macruufka, laakiin waxay cod dheer tahay Apple oo keliya dayrta (iyada oo loo marayo 9to5Mac).
Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan taariikhda la sii daayay ee barnaamijka softiweerka ah ayaan wali la helin. Jadwalka cusboonaysiinta Apple waa mid la yaab leh sannadkan. Tusaale ahaan, casriyeynta iOS 13 ee Sebtember 19, iOS 13.1 iyo iPadOS (13.0 ama laga yaabo inay u dhigmaan 13.1) ayaa la heli doonaa laga bilaabo 30ka Sebtember. WatchOS 6 ayaa sidoo kale la sii dayn doonaa Sebtember 19, laakiin waxaa kaliya loogu talagalay Apple Watch taxanaha 3; Moodooyinka waaweyni waxay helayaan cusboonaysiinta goor dambe xilliga dayrta.
Astaamaha cusub ee HomePod waxaa ka mid ah kartida lagu garto illaa lix cod oo kala duwan. Sidan, jawaabaha ka soo baxa Siri waxaa lagu waafajin karaa qofka quseeya mustaqbalka. Google Home iyo Amazon Echo horeyba waxay u soo bandhigeen howshan oo kale.
Sidoo kale horeyba loogu dhawaaqay suurtagalnimada in lagu gudbiyo muusigga hadda jira, cod-baahiyaha ama xitaa taleefan laga soo diro iPhone ama iPad oo loo aado HomePod. Ku wareejinta qalabkan aan isqurxinta lahayn wuxuu si xoog leh ugu guuleystaa Apple si fudud isagoo gacanta ku haysta aaladda iOS ee ku xigta HomePod.
Apple HomePod tijaabadeenna:
Cusboonaysiinta HomePod: Apple waxay wacdaa muuqaal cusub
Bogga hore ee Mareykanka ee HomePod-ka ayaa sidoo kale jira muuqaal kale oo cusub. “Dhawaqyada jawiga” (loo tarjumay “dhawaqa jawiga”) waxay ballan qaadayaan nasashooyinka mowjadaha hirarka, shimbiraha, roobka iyo waxbadan. Dhanka ApplePage-ka Jarmalka wali raad kuma leh raad raac.
Sidoo kale cusub ayaa ah awooda loogu rogayo ‘HomePod’ raadiyaha raadiyeyaasha internetka. Iyada oo la kaashanayo Siri, idaacadaha Jarmalka ayaa la heli karayay toddobaadyo dhowr ah waxaana dib loogu ciyaari karaa HomePod. Tani waxay horeyba ula shaqeyneysaa barnaamijyada haatan la heli karo ee HomePod.